Rakhiyo Qabyo-warshadeed oo aad u jaban oo loogu talogalay alaab-qeybiyeyaasha qallajinta bacriminta | YiZheng
Maxaa Loo adeegsadaa Qabyo Qoraalka Qaboojiyaha Heerkulka Sare?
•Tamarta iyo tamarta: Warshadda korontada ee kuleylka ah, Warshadda qashinka lagu gubo qashinka, Warshad tamarta shidaalka ee Biomass, Qalabka soosaarka kuleylka qashinka Warshadaha.
•Biraha dhalaalaya: Hawo afuufaya macdanta oo daadinaysa (Mashiinka Sintering), Soosaarka Coke ee Foornada (Furnace coke oven).
•Gaaska iyo bixinta qalabka: Gaarsiinta guud ee hawada, gaarsiinta hawada heerkulka sare, gaarsiinta gaaska guban kara, gaarsiinta gaaska waxsoosaarka ah, gaaska lagu qaso gaarsiinta nijaasta
•Bixinta budada dhuxusha, Qalabka walxaha / Qalabka budada / Qalabka jajabka / Qalabka Fiber.
•Kale: Cadaadis iyo shaambad decompression ee qalabka warshadaha, Soo celinta gaaska wasakhda warshadaha, Hawo siinta iyo qallajinta khadka wax soo saarka dawada.
Astaamaha Heerkulka Sare ee Qaboojiyaha Qabyo Fan
•Soo saarista cadaadiska gaaska ee sareeya, iyo bixinta mugga qulqulka hawada, buuq yar.
•Blades angle oo maraya naqshadeynta naqshadeynta, xirashada sare ee u adkeysata, nolosha adeegga dheer.
•Si dabacsan ayuu u hagaajin karaa mugga taageeraha iyo cadaadiska uu ku socdo hawo-qaboojiye. Sidoo kale wuxuu hagaajin karaa cadaadiska iyo mugga taageere adiga oo beddelaya xawaaraha marawaxadda adoo u maraya mashiinka isdabajoogga ah ee isbedelaya
•Waxtarka gudbinta sare iyo tamar luminta nidaamka taageere hoose.
•Isku-dabacsanaanta mashiinka mashiinka iyo isdaba-marinta gudbinta, looma baahna xiisad ama beddel suunka, mashiinka qiiqa ee shaqada dayactirka hooseeya.
•Qancin karaa xaaladaha boodhka kala duwan
•Qaadashada keydadka guryaha ee meel lagu rakibo heerkulka iyo dareemayaasha gariirka, waxay si fudud ugu rakibi karaan qalabka kormeerka marawaxadaha.
•Xulashada matoorka keydinta tamarta ee shirkadda soo saarta matoorka Shiinaha (ama loo baahan yahay macmiil), tayo la isku halleyn karo, isticmaalka tamarta oo hooseeya.
•U habeynta naqshadeynta iyadoo loo eegayo shuruudaha waxqabadka macaamiisha.
•Qaadashada waxsoosaarka birta kaarboon oo tayo sare leh, ama birta birta ah iyo qalabka kale ee birta ah iyadoo la raacayo shuruudaha macaamiisha.
•Qaybaha ikhtiyaariga ah ee kala duwan ee xulashadaada.
Heerkulka Sare ee Warshadaha Soosaaray Muuqaalka Fan Fan
Xulashada Heerkulka Sare ee Qabsoomida Xulashada Habka Taageerayaasha
Xawaare r / min
Wadarta cadaadiska Pa
Socod m3/ h
Socodka m3 / h
Hore: Foornada hawo kulul
Xiga: Uruuriyaha Boorka Duufaanta
Hordhac Muxuu yahay Wareegtada Suumanka Moobaylka ee la qaadan karo? Wareegtada Suumanka Moobilka ee la qaadan karo waxaa si weyn loogu isticmaali karaa warshadaha kiimikada, dhuxusha, miinada, waaxda korantada, warshadaha fudud, badarka, waaxda gaadiidka iwm Waxay ku habboon tahay gudbinta waxyaabo kala duwan oo ku jira granular ama budo. Cufnaanta badan waa inay ahaataa 0.5 ~ 2.5t / m3. Waa ...